September 2010 ~ brazesh
September 26, 2010 नेपाली, बायाँ फन्को-नेपालबाट3comments
September 12, 2010 नेपाली, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
कीराहरू विभिन्न प्रजातिका हुन्छन्। केही अपवादलाई छोड्ने हो भने अधिकांश कीराहरू मान्छेका लागि हानिकारक नै हुन्छन्। कीराहरू निकै छिटो विस्तार हुनसक्ने, प्रतिकूल र विषम परििस्थतिमा पनि आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्ने हुनाले यिनीहरू हतपति नाश हुँदैनन्। कीराहरू घिनलाग्दा पनि हुन्छन्। त्यसैले बाघभालुसँग नडराउने मान्छे पनि कीरा भनेपछि तर्सन्छ।
अचेल हाम्रो वरपिरकिो वातावरण पनि कीरामय भएको छ। पछिल्लो केही समय घर, बजार र बाटोघाटो जताततै कीराहरू देखिन थालेका छन्। हुन त यो वषर्त्को मौसम भनेको कीराहरू बढी सल्बलाउने, सक्रिय हुने र फस्टाउने समय हो। तर, यसपालि अरू नै केही कुराले गर्दा कीराहरूको बढी चलखेल भएको हुनुपर्छ। कहिले नसकिने फोहोरको राजनीतिका कारण महानगरपालिका र डम्पिङ् साइट वरपिरकिा बासिन्दाको विवाद यसपटक पनि तन्की नै रह्यो। त्यसको कारण कुनै लाज नभएको, नालायक र अलोकपि्रय नेता गर्वसाथ कुर्सीमा लिसो टाँसिएर बसेजस्तो गरी फोहोरमैला बाटोमा नै गर्वसाथ रहिरहे। थुप्रै दिनसम्म गल्लीगल्ली र सडकसडकको शोभा बढाउन सफल यी फोहोर वषर्ात्को पानीमा भिज्दै, बेलाबेला झुल्किने घाममा सुक्दै गर्दा यिनमा पनि स्याउँस्याउँ कीराहरू जन्मे, हुर्के, फैलिए र विस्तारति भए। तिनले लघुकालीन रूपमा बाटो हिँड्नेहरूलाई नाक थुनेर सास रोक्ने कलाको राम्रै अभ्यास गर्ने मौका प्रदान गरे भने दीर्घकालीन रूपमा जनस्वास्थ्यमा कति ह्रास पुर्‍याए भन्ने कुराचाहिँ लेखाजोखा गर्न बाँकी नै छ।
त्यसपछि कीराहरूलाई बढी चर्चित बनाउने काम कुनै पेय पदार्थमा भेटिएका कीराहरूले गरे। यस्ता कीराहरू पहिले पनि बेलाबेला भेटिने र हराउने नगरेका त होइनन् तर यसपटक यी कीराहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि अलि ठूलै तहमा भएका कसरतहरूका कारण लहरो तान्दा गर्जिएको पहरोले गर्दा यी झीना-मसिना कीराहरूको अस्ितत्व डायनोसरको जस्तो बन्न पुग्यो। अब पहिले जस्तै खुसुक्क आउँदै र खुसुक्क जाँदै गर्न यी कीराहरूलाई गाह्रो हुने भयो। जनस्वास्थ्यका लागि यो निश्चय नै पनि सुखद कुरा हो। अब सम्बन्धित निकायले यी कीराहरूका बारे गर्नुपर्ने जाँच र अनुसन्धान गरेर सफा चित्र देखाउने नै छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
कीराकै कुरा भइरहेका बेला हामीले अरू कीराहरूका बारेमा पनि किन खोजीनीति नगर्ने त ? कीरा सपि्रन र मौलाउनका लागि विशेष किसिमको परििस्थतिको आवश्यकता हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। खास गरेर फोहोर र प्रदूषणमा कीराहरू रमाउँछन्। त्यसैले सामाजिक र राजनीतिक वातावरण फोहोर र प्रदूषित भयो भने त्यहाँ पनि कीराहरू उत्पत्ति हुन्छन् र फैलिन्छन्। हामीलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हानि गर्ने अरू थुप्रै कीराहरू पनि नभएका होइनन्। हेर्दाखेरी कीराको जस्तो रूप नभएका तर बानी बेहोरा र चरत्रि त्यस्तै भएका अरू प्राणीहरूलाई पनि किन कीराकै वर्गमा नराख्ने त ? अनि, कीरासँग जस्तै तिनीहरूसँग पनि किन सतर्कता नअपनाउने ?
लौ त भनौँ भने पेय पदार्थका बट्टामा भएका कीराहरूसँग बच्न त्यो प्रयोग नगर्दा सकिन्छ। तर, तीभन्दा बढी अहिले हामीलाई असर गररिहेका कीराहरूका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला होइन र यो ? कुनै कीरा हामीलाई फाइदा गर्ने हुन्छन्। रेशमजस्तो मुलायम पदार्थ पनि कीराबाट नै बन्ने हो। हामीलाई रेशमको मुलायमपनाको आवश्यकता भएकाले हामी जनताले रेशम बनाउनका लागि कीराहरू पाल्यौँ, सेतो ठूलो बट्टामा। तिनबाट एउटा निर्धारति समयमा रेशम प्राप्त हुन्छ भनेर दंग पनि पर्‍यौँ र रेशम प्राप्त भएपछि यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भनेर आशावादी पनि भयौँ। तर, तिनबाट हामीलाई भनेको समयमा रेशम प्राप्त भएन। हामीले म्याद पनि थपिदियौँ। अहिले पनि हामी यो थपिएको समयमा त रेशम कसो नपाइएला भनेर आशावादी छौँ। तर, कीराहरू भने रेशम बनाउनेभन्दा अरू नै कुरामा अन्त्यहीन विवाद गर्न थालेका छन्। उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यो समयमा पनि रेशम प्राप्त हुन सकेन भनेचाहिँ हामीले फरक हिसाबले सोच्नुपर्ने हुन सक्छ। भोलि हामीले रेशम कीरा भनेर अरू नै कुनै कीरा पालेका रहेछौँ भन्ने थाहा भयो भने त्यसले सबैभन्दा दुःखी हामीलाई नै तुल्याउँछ। सबैभन्दा बढी हानि पनि हामीलाई नै पुर्‍याउँछ। कीराहरू त कुनै पनि परविर्तित परििस्थतिमा आफूलाई ढाल्न खप्पिस हुन्छन्।
त्यसैले रेशम कीराका बीचमा अरू कीराहरू उत्पन्न हुन र फैलिन नपाउन् भन्नाका लागि त्यहाँको वातावरणलाई प्रदूषित र फोहोर हुन नदिन सबैले जिम्मेवार भएर आफ्नो सोच, आनीबानी र आचरण सुधार्नु पर्‍यो। कसैको पनि व्यक्तिगत, समूहगत वा वैचारकि स्वार्थभन्दा बढी सबैले यो राष्ट्र र यसमा बस्ने पौने तीन करोड जनताको स्वार्थलाई सर्वोपर मान्न सक्नुपर्छ।
त्यसैले देखिने कीराहरूका साथसाथै नदेखिने कीराहरूका बारेमा पनि हामी सबै सचेत हुनु जरूरी छ। हामीले आफैँलाई पनि नियालेर हेर्ने हो भने सायद अरू कीराहरू पनि हामीले आफँभित्र पनि भेट्छौँ। जानी/नजानी कतै हामीले त्यस्ता कीराहरू पालेर त बसेका छैनौँ भनेर आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला पनि हो यो। आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुने, आफ्नो अकर्मण्यताका भारीजति अरूको थाप्लोमा जाक्न खोज्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा डरलाग्दो कीरा हो। यसलाई हामीभित्र पलाउन नदिनका लागि सचेत हुन सकेनौँ भने त्यसको परण्िााम भयावह हुनसक्छ।